Top 5 Android Project Management Ngwaọrụ ka Nọgidenụ Good Track nke Projects
1.1 Android Ngwaọrụ Manager
1.2 Android Ndi ana-akpo Manager
1.6 Android Podcast Manager
1.8 Android Bluetooth Manager
1.9 Android Paswọdu Manager
2.0 Android nkebi Manager
2.1 Android efu Manager
2.2 Android Audio Manager
Ma gụọ 2.3 Android ROM Manager
2.4 Android Battery Manager
2.5 Android Task Manager
2.6 Android Mmalite Manager
2.7 Android Ohere Manager
2.9 Android oku Manager
3.0 Android Nkpọrọgwụ Manager
3.1 Android ngosi Manager
3.2 Android ebe nchekwa Manager
3.3 Android Desktọpụ Manager
3.4 Android Update Manager
3.5 Android Nchekwa Manager
3.6 Android Project Manager
Tupu ekwurịta ihe banyere Android oru ngo management ngwaọrụ, ị ga-akpa ịghọta ihe a ngo bụ. Dị ka Project Management Isi nke Ihe Ọmụma (PMBOK), oru ngo a kọwarala dị ka a nwa oge mbọ ike a pụrụ iche ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ n'ihi ya. Ọ bụla oru ngo nwere anya mmalite na ọgwụgwụ. Ọgwụgwụ bụ ruru mgbe ebumnobi nke oru ngo e enweta, mgbe oru ngo a kwụsị n'ihi na ya ebumnobi na-sụgharịrị apụghị iru ma ọ bụ mgbe ọgwụgwụ ngwaahịa ma ọ bụ n'ihi nke oru ngo a adịkwaghị mkpa. Ngwaọrụ dị nnọọ oké mkpa maka nsuso ọrụ dị ka ha na-etolite Central akụkụ nke nsuso usoro. Ha soro ihe na-n'ezie na-eme na oru ngo nke mere na-arụpụta n'ezie pụrụ iji tụnyere Planned results na mezie ihe na-eme iji dozie deviations. Gam akporo igwe-abịa na ma na-akwụ ụgwọ na free oru ngo management software na aggressively ịgbasa ngwaahịa atụmatụ set.
Part 1: Android Iji-do-ndepụta Manager App VS Android Project Management App Part 2: Top 5 Android Project Management égwu Part 3: Nghoputa: Kedu Android Project Management égwu na-amasị gị Part 4: Olee otú Download / Wụnye / Uninstall / Share Project Management maka Android na Otu Ebe
Part 1: Android Iji-do-ndepụta Manager App VS Android Project Management App
Na obi nke ọ bụla ịga nke ọma ngo bụ a chere echiche nke ọma si atụmatụ ma gbuo ya. N'ihi ogologo oge oru ngo management usoro nwere kwụsịrị kwalitere mmekota n'etiti ìgwè ndị ọkachamara ma n'ụwa taa technology gbanwere ụzọ oru ngo management.
Android oru ngo management ngwa ọdịnala na-enye ngwọta maka i nyochaa ọganihu nke oru ngo ọbụna mgbe ị na-arụ ọrụ na-abụghị ọrụ. Ọ nwere obosara nso na okwu nke atụmatụ na ike. Otú ọ dị, ị pụrụ iche ma i nwere ike iji Android-eme-ndepụta oru na-ebe nke oru ngo management ngwa. Ka kọwaa ha na nkọwa:
Gam akporo na-do-ndepụta njikwa
Android oru ngo management ngwa
1. Personal ojiji Professional na-arụ ọrụ ojiji
2. Mfe na-enweghị CRM usoro Na CRM usoro
3. Ọ dịghị netwọk chọrọ Network chọrọ
4. All gburugburu ebe obibi Ebe ọrụ
5. Lekwasị anya na n'ihi -Elekwasị anya na ọganihu
1. Iji-do-ndepụta njikwa awade a zuru ihe na-do ndepụta ruru eru maka onye ọrụ management. Ọ dị mma na-arụ ọrụ dị ka ihe ncheta gị, mgbe Android njikwa ngwa na-eji ya arụ ọrụ na ọkachamara.
2. Iji-do-ndepụta oru ndị na-emekarị mfe iji. Mee a mgbe ị ga-akpọ gị na nne gị na ọ ga-echetara gị na ụdaolu. Project management ngwa ọdịnala na-eji ọrụ mere na ọtụtụ ndị ga-aka na oru ngo a. Nke a na ụdị oru ngo management ngwá ọrụ na-mgbe ụfọdụ na-akwụ ụgwọ na e mere maka ụlọ ọrụ na niile ụlọ ọrụ òtù ma ọ bụ ndị si ụlọ ọrụ ndị ọzọ. CRM usoro bụ kwesịrị maka nke a.
3. Ebe ọ bụ na ndị mmadụ si ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwekwara ike isonye na oru ngo, oru ngo management ngwá ọrụ na-achọ netwọk n'ihi na ndị mmadụ imelite ọganihu. Ọ dịghị netwọk nwekwara ike na-arụ ọrụ site na iji-do-ndepụta oru.
4. Iji-do-ndepụta oru nwere ike ọrụ, ịzụ ahịa, ezinụlọ edemede mere maka unu mgbe oru ngo management ngwa bụ nanị n'ihi na-arụ ọrụ.
5. Mgbe ndị na-eme a-eme-ndepụta, ya isi nzube bụ mezue ọrụ. Ọfọn, mgbe ndị mmadụ ike a oru ngo, ndị mmadụ na-eme atụmatụ imelite ọganihu na isi chọrọ ego na.
Nkebi nke 2: Top 5 Android Project Management égwu
N'okpuru ebe a bụ mbadamba banyere n'elu 5 oru ngo management ngwa ọdịnala n'ihi Android. Ị nwere ike a lee anya na ya ma họrọ gị chọrọ ngwa na-ezi esochi gị oru ngo.
1. Basecamp - Official App Free 4.7 / 5
2. Smartsheet: Project Management Free 4.1 / 5
3. Project Management System Free 4.7 / 5
4. MPM Mobile Project Manager Ugwo 4.1 / 5
5. BBitrix24 Free 3.9 / 5
1. Basecamp - Official App
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị Mmanu égwu na oru ngo management na atụmatụ n'okpuru:
Ọ achọpụtazi oru ngo ọganihu.
Ọ na-enye ụlọ maka mkparịta ụka na oru ngo analysis.
Ọ na-enye ikpo okwu maka oru ngo otu òtù ịkọrọ echiche na ụlọ maka alo.
Ngwa-enye ohere njikwa ka mfe na-adọ na-aka na oru ngo otu òtù.
Ọ na-enye ohere maka oru ngo otu òtù na-atụle ma na-enye echiche ha na uche banyere oru ngo.
Team òtù jupụta na bulite ime faịlụ mere na ndị niile otu òtù nwere ike ịlele na oru ngo ọganihu.
Ya-enye gị ka ịnweta ma na-ele oru ngo ọganihu n'ebe ọ bụla na ị bụ.
Ngwa si Basecamp kpochapụwo na-adịghị akwado.
Download Basecamp - Official App si Google Play Store >>
2. Smartsheet: Project Management
Smartsheet bụ ngwa na-enye ikpo okwu maka ime na-arụ ọrụ. Isi atụmatụ nke a ngwa bụ:
Ọ nwere mfe spreadsheet.
Ọ na-enye interface maka ekere òkè faịlụ.
Ya site akpaghị aka workflows na ike na-akọrọ ndị oru ngo otu òtù.
Ọ na-ekwe ngo njikwa ịzụlite Gantt chaatị dị iche iche.
Ngwa bụ mfe iji.
Ọ bụ nnọọ mgbanwe na ụdị ọ bụla nke oru ngo si mfe aga-eme ka mgbagwoju aga-eme n'oge ụzọ dum nke oru ngo mmejuputa iwu.
Ngwa akpịrịkpa nnọọ ngwa ngwa na awade kacha nche, integrations ma na njikwa na gafere ụlọọrụ chọrọ.
Ọ na-ekwe oru ngo otu òtù ịkọrọ echiche na akụkọ metụtara oru ngo ọganihu.
Ọ na-achọ ka ị na-mgbe niile mbubata ẹdude faịlụ site na ndị ọzọ omume dị ka Excel, ma ọ bụ download ihe nke na-ewe oge na mgbe ụfọdụ ha nwere ike ịnwe-enyo anyị enyo omume ma ọ bụ virus.
Download Smartsheet: Project Management si Google Play Store >>
3. Project Management System
Nke a na-enye ohere App ma obere na nnukwu ulo oru streamline ha oru ngo management ọrụ.
Ọ na-enye nyiwe ịgbakwunye ma ọ bụ ike ọhụrụ oru ngo.
Ọ nwere n'elu ikpo okwu na-ekesa ihe aga-eme n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu na oru ngo otu.
Ọ nwere search na òkè aga-eme nhọrọ.
Ọ na-enye nyiwe ka n'obi imecha ihe ncheta.
Nke a ngwa bụ mgbanwe na gị soro ọganihu nke oru ngo mfe.
Ọ enye gị ohere ịchịkwa oge nke oru ngo site na-agbakwụnye mmalite na ọgwụgwụ ụbọchị nke oru ngo soro ọganihu nke ọrụ.
Ya pụrụ ime ka mfe oru ngo mgbagwoju anya.
Ọ na-adịghị ekwe ka ị na-eri nri ụfọdụ ihe na oru ngo a.
Download Project Management System si Google Play Store >>
4. MPM mobile njikwa
Ọ na-enye ngwọta maka eke ọhụrụ oru na ị nwere ike mbubata si MS Okwu, Excel wdg
• Ọ nwere ọtụtụ ụzọ.
• Ọ na-enye HTNL / Excel utilities eji maka Gantt chaatị nkwadebe na akuko.
• Ọ na-enye njikọ maka faịlụ, kọntaktị, na ndetu.
• Ọ na-enye ịba uru eji maka na-achọ ihe aga-eme n'ime oru ngo.
• Ọ na-enye gị ohere iji jikwaa ego n'oge oru ngo mmejuputa iwu.
• Ọ na-enye ndepụta nke dabere ọrụ nke mere na oru ngo oru ga-nso ntị ma na-elekọta ụfọdụ aga-eme.
• Ọ site akụkọ na kọntaktị niile aga-eme na oru ngo otu òtù.
• Ọ na-enye gị ohere iji nwere nchịkọta nke oru ngo ọnọdụ.
• Ọ na-enye mfe nkwurịta okwu site n'iji MPM ozi oru ngo otu òtù.
Ngwa bụ ewekarị n'iyi mgbe ọ bụla ị na-agbalị na-emeghe a ọhụrụ kere oru ngo.
Download MPM mobile njikwa si Google Play Store >>
Nke a android management ngwa bụ a na-elekọta mmadụ esịtidem netwọk n'ihi na ị - ụlọ ọrụ ọrụ. Ọ enhances esịtidem ọmụma mgbanwe na nkwukọrịta na ebe a zuru ezu set nke azụmahịa ngwaọrụ otu kensinammuo interface.
Na a na ngwa, ị nwere ike ịkekọrịta omume, ikwu na ndị ọzọ ndị mmadụ posts, dị ka posts, na zipu nzi ozi na Ịma Ọkwa. Ọzọkwa ọ na-akwado ụlọ ọrụ ndekọ na-arụ ọrụ ìgwè.
Ọ ejisie ma oru na aga-eme.
Ọ na-enyere gị na-atụle echiche atụmatụ na-aga n'ihu ihe ndị mere na a na-elekọta mmadụ na netwọk usoro.
Ọ na-enyere gị ka atụmatụ nzukọ na-akọrọ Kalenda.
Ọ na-enye na nchebe na mfe ọmụma mgbanwe.
Ọ enwekwu arụmọrụ nke ọ bụla na-arụ na dum ụlọ ọrụ.
BBitrix24 bụghị IT centric.
Documentation bụghị dị ka zuru ezu dị ka ndị ọzọ ngwa.
Download BBitrix24 si Google Play Store >>
Nkebi nke 3: Nghoputa: Kedu Android Project Management égwu na-amasị gị
<a href="http://polldaddy.com/poll/8141436/">Which Is your Favorite Android Project Manager App?</a>
Nkebi nke 4: Olee otú Download / Wụnye / Uninstall / Share Project Management maka Android na Otu Ebe
Ke akpa akụkụ abụọ, m na-egosi gị ihe iche n'etiti Android njikwa na ngwa na Android-eme-ndepụta njikwa na ngwa na ndepụta n'elu 5 Android oru ngo oru. Na nke a, m na-ekpebi na-egosi gị ezi ihe ngwọta na-enyere gị ibudata, wụnye, uninstall, ndabere ma na-eso Android njikwa ngwa ọdịnala na otu ebe.
Iji nke a ngwọta, nke mbụ niile, i kwesịrị ibudata na wụnye software - Wondershare MobileGo for Android (Win) ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) na kọmputa gị. Mgbe ahụ, na-eso mfe nzọụkwụ jikwaa njikwa ngwa ọdịnala n'ihi Android.
Rịba ama: The Mac version adịghị-enye gị download center ibudata Android oru ngo ngwa, akpali ngwa SD kaadị ma ọ bụ òkè ngwa ọdịnala na ndị enyi gị.
Nzọụkwụ 1. Download nri version nke software na kọmputa. Wụnye na-agba ya.
Nzọụkwụ 2. Jiri eriri USB jikọọ gị Android ekwentị na kọmputa. Ọ bụrụ na ị a Windows onye ọrụ, ị nwekwara ike iji na-eme ka njikọ site WiFi.
Nzọụkwụ 3. On top n'akụkụ aka ekpe, pịa Google Play égwu ibudata na wụnye Android njikwa ngwa kwuru n'elu. (Nanị maka Windows version)
Nzọụkwụ 4. Pịa ngwa ọdịnala na ekpe kọlụm iji bugote ngwa management window. Mgbe ahụ, ị ​​nwekwara ike mbubata na wụnye oru ngo management ngwa site na kọmputa, mbupụ ndị a ngwa ọdịnala na kọmputa, akpali ngwa SD kaadị, na-ele zuru ezu Ama banyere ndị a ngwa, na-eso ha na ndị enyi gị site na Facebook, Twitter ma ọ bụ SMS.
Cheta na: N'ịga oru ngo manịja Android ngwa SD kaadị na-ekere òkè ngwa nwere ike na-eme na Windows version n'ihi na oge ịbụ.
Nkwado ndabere na mpaghara weghachite akporo ekwentị
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara Photos na android ekwentị
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara Ndi ana-akpo na android ekwentị
3 Ngwaọrụ nkwado ndabere na mpaghara Android SMS ka PC, SD Kaadị & Ígwé ojii
Ihe niile banyere iTunes U maka Android
Bugharịa faịlụ ka / si gam akporo ngwaọrụ site na WiFi
A Full Guide nkwado ndabere na mpaghara Android SD Kaadị
Nyefee Data si gam akporo ka iPhone
Copy Data si iPhone ka Android
Gịnị bụ Rom / femụwe na Olee otú ndabere Android Rom / femụwe
A Full Guide na Olee otú nkwado ndabere na mpaghara Android na ekwentị PC
Otú nyefee Ndi ana-akpo na SMS si Blackberry ka Android
10 Best Optimizers maka Android
The Best 5 Android Video Players
Top 3 Android ngosi Manager: Mechie Off manụ Ịma Ọkwa effortlessly
Top 7 Alternatives ka iTunes ngwa ọdịnala n'ihi Android
Nyefee na Ndi ana-akpo si iPhone ka Sony Xperia
Olee otú Naghachi ehichapụ Pictures si LG ùgwù
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos & Videos si HTC kpalie
> Resource> Android> Top 5 Android Project Management Ngwaọrụ ka Nọgidenụ Good Track nke Projects